साताको तस्वीर : नबीगाउँको पीडा ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : नबीगाउँको पीडा !
२०७५ मंसिर १२, बुधबार १४:२३	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
शव्द/चित्र दिनेश शर्मा,
ढोरपाटन २०७५ मंसिर १२ । मनोरम ढोरपाटनको बीच भएर बग्ने नबी खोला (सानो भेरी) किनारमा अवस्थित रमणीय नबी गाउँमा अहिले धुवाँ पुत्ताई रहेको छ । घरहरु जलेर भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । मंसिर ९ गतेको बिहान घाम झुल्कन नपाउदै सुन्दर नबीगाउँ भीषण आगलागीको चपेटामा प-यो । आगो निभाउने प्रयास गर्दागर्दै गाउँका ३० घर जलेर खरानी भए । गाउँका दुइ दर्जन घरहरु जोगिएका छन् ।
चार दिन देखी ढोरपाटन शोक मग्न छ । जलेका ३० घरमा बस्ने ४८ परिवारको बिचल्ली छ । आधा गाउँ नै खरानी भएको हृदयविदारक घटनाले ढोरबासी मर्मान्त पीडामा छन् । यो दु:ख र पीडाबाट उब्रन दुई चार दिनले कसरी पुग्ला र ? महिनौ दिन लाग्न सक्छ । घरहरु भग्नाबशेषमा परिणत त भए नै, त्यस भित्र रहेका बन्दोबस्तीका (ओढने ओछ्याउने बिस्तरा दखी अन्नपात) सबै सामान जलेर नष्ट भएको छ । पीडतहरु सहयोगको अपेक्षामा रहेका छन् ।
प्रत्यक वर्ष असोज महिनाको चौथो सातामा ढोरबाट प्राय सबै मानिसहरु गाईबस्तु सबै लिएर बेसी गाउँ (बोबाङ/अधिकारीचौर) झर्ने गर्छन् भने फागुन महिनाको चौथो हप्ता देखी गाईबस्तु भेँडा पाठाहरु सहित ढोर फर्कने क्रम सुरुहुन्छ । यसावधीमा गाउँलेहरुले मानो भर्ने (तवल दिने) गरी चारपाँच जना कुरुवा राख्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसै कारण यस दु:खद घटनामा कुनै मानवीय वा पशुधनको क्षती हुन पाएन । आगोलागीको समयमा नबीगाउँमा चारजना कुरुवा मात्र थिए ।
आगोलागीले घर जलेर खरानी भएको खबर पाउँदा साथ ढोर फर्किएका नवीगाउँ बासीहरुको आँखाबाट बरबर आँशु झरिरहेको छ । उनिहरुको आङ(शरीर)मा घाम लागेको छैन । आगलागीबाट गास बास सबै खरानी भएको देख्दा उनिहरुको मन छियाछिया भएको छ । कसरी मन थाम्न सक ेहोलान ? बाहिरबाट जानेहरुको मनमा यहि प्रश्न दोहोरी रहन्छ । पीडितहरुको अश्रुधारा सहितका मलीन चेहराले हाम्रो गासबासको व्यवस्था गरिदेउ भनिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
एक जना बृद्ध महिला आगलागीबाट ध्वस्त भएको घरमा बसेर ढुंगा पन्छाउदै थिईन्, के खोज्दै हुनुहुन्छ ? भन्दा आँखाबाट बरबरती आँशु झार्दै भनिन्. ‘बाबु’ केहि भेट्टिन्छ कि भनेर …. ।’
कति मायाँ छ उनलाई उनको बासको, कति महत्व छ आफ्नो पौरखले जोरजाम गरेको सम्पति को । उनको त्यो शव्दले कसको मन रहला ? उनी जस्ता थुप्रै पीडितहरुको पीडा वर्णन गर्न नसकिने छ । काखका लालाबाला लिएर घरको भग्नावशेषमा घुमिरहेको देख्न सकिन्छ । उनिहरुले कल्पनै नगरेको बज्रपात व्यहोर्नु परेकोछ । उनिहरु कसरी भयो, कसले लगाई दियो आदित्यादिको जवाफ खोजिरहेका छन् । एउटा घरमा लागेको आगोले गाउँनै खरानी हुने अवस्था छैन । घरहरु धेरै दुरीमा रहेका छन् । कसैले जानाजानी वा रिसिबीले घरघरमा आगो लगाई दिएको पीडितहरुको मात्र होईन घटनाको अवलोकन गर्ने जो कोहिले पनि अनुमान गर्न सक्छ ।
आगो नियन्त्रणमा लिन ढोरपाटन स्थित नेपाली सेनाको हनुमान ध्वज गुल्मको प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ । आगलागीको सूचना पाउँदा साथै गुल्मपति मेजर रविजंग खड्काको कमाण्डमा १ सय २० जनाको टोलीले विहान पौने ४ बजे देखी विहान ८ बजे सम्मको अथक प्रयासबाट आगो नियन्त्रणमा लिएर अन्य २३ घरहरु जोगाउन सफल भएको थियो ।
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जंगलसंगै जोडिएको नबीगाउँमा फायर लाईन बनाएर जंगललाई आगलागी हुनबाट बचाउन सेनाले गरेको कार्यको सबैले प्रशंसा त गरिरहेका छन, शिकार आरक्षको ठुलो भाग आगलागी हुनबाट जोगाएमा खुशी व्यक्त गरिहेका छन् ।
घटनाको लगत्तै ढोरपाटन पुगेका नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीको टोलीले पीडितहरुलाई जनही एक/एक लाख नगद सहयोग ढोरपाटन नगरपालिकाले दिने र आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा सबै पीडितहको घरको छानो कर्कट पाताले छाईदिने उदघोषले पीडितहरुको पीडामा मल्हम्को काम गरेको छ ।
सरकारी रहत रकम लिएर मंगलबार ढोरपाटन पुगेका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेल, प्रहरी उपरीक्ष दीपक रेग्मी, ईलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिवाङका प्रमुख नन्दराम भुषाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्र पन्त, ईलाका प्रहरीकार्यालय बुर्तिवाङका प्रहरी निरीक्षक ओम प्रकाश यादव सहितको टोली नवी गाउँ पुग्दा त्याहाँको दृश्य हृदयविदारक थियो भने पीडितहरु दयनीय अवस्थामा थिए ।
प्रजिअ खरेलले राहत रकम वितरण गरिरहँदा एक जना बृद्ध महिलाले रकम बुझ्दै गर्दा आँखाबाट बरबरती आँशु झार्दै आशीष दिएकी थिईन, ‘बाबु तिमी धेरै वर्ष बाँचे… ।’
बृद्धा मात्र नभएर पुरुषहरु पनि राहत रकम थापी रहँदा सबैका आँखामा आँशु रसाएको देखिथ्यो । यस दृश्यले अग्निपीडितहरु कति मर्मान्त पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो ।
नवीगाउँको तस्वीर केहि वर्ष पहिले खिचिएको हो । – संपादक ।
नेपाली सेनाको तस्वीर सोजन्य: ईन्द्र शाही, ढोरपाटन ।
रमेश बिक रसाईलीको शब्द सिर्जना रहेको ‘मन को मान्छे … ‘सार्बजनिक !
चौराहा लगायत गल्कोट क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरुमा होम स्टेको व्यवस्था जरुरी !